Semi Solid သေကာစ်မှို China Manufacturers & Suppliers & Factory
Semi Solid သေကာစ်မှို - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Semi Solid သေကာစ်မှို ထုတ်ကုန်များ)
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အောက်ရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ OEM အမြင့် Precision
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အောက်ရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ OEM အမြင့် Precision မြင့်မားသောတိကျသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပေါ့ပါး၏, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်သာ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်ဆင်းလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်ကင်မရာ, ကင်မရာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ, မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ,...
Smart Watch Frame ကများအတွက်စိတ်ကြိုက် Semi-Solid သေကာစ်
အဆိုပါစမတ်လက်ပတ်နာရီဘောင်များအတွက် ချ. သေဆုံး, semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း၏ solidification ကျုံ့လျှော့ချသည်, ထိုသတ္တုများပုံသွန်း၏တိကျမြင့်မားသည်, အသွင်အပြင်အရည်အသွေးကိုကောင်းလှ၏အဆိုပါ Semi-အစိုင်အခဲ, အစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အရေအတွက်လျှော့ချသည်နှင့်စက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကိုပင်ရယူနိုင်ပါသည်။...
Smart Watch အစားထိုးသိုင်းကြိုး Casting semi-Solid သေ
ကျနော်တို့ပစ္စည်းကိရိယာများ Casting အများဆုံးနည်းပညာအဆင့်မြင့် Die နဲ့ဆန်းသစ် automated သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်ရုံပါရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စွန့်ပစ် minimize လုပ်ဖို့စက်ရုပ်အလုပ်ဆဲလ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်မော်နီတာအကောင်အထည်ဖော်ပါပြီ။...
မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ DieCasting Mag အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ SemiSolid
ဒီနေ့ရဲ့မော်တော်ကားများတွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာလူမီနီယံထက် 33% ပိုမိုပေါ့ပါး, သံမဏိထက် 75% ပိုမိုပေါ့ပါးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အင်္ဂါရပ်ပေါင်းစည်းမှုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်မထိုက်မတန်နှင့်ချောတိုးတက်ကောင်းမွန်မယ့်မြင့်မားတဲ့ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုပေးပါသည်။...
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting OEM အလိုအလျောက် Semi Solid သေ
မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်ကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်ဒိုင်ခွက်, ထိုင်ခုံထောက်ခံမှု, ဂီယာအုံ shell ကို, ဦးတည်ချက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အစိတျအပိုငျး, အင်ဂျင်အဖုံးကားတံခါး, အင်ဂျင်ဆလင်ဒါ, ဘောင်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းများအသုံးပြုခြင်း,...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်ပစ္စည်း Casting OEM Semi Solid သေဆုံး
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်ပစ္စည်း Casting OEM Semi Solid သေဆုံး, ဒါကနမူနာ CNC အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာကိုဖန်ဆင်းတဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမောင်းသူမဲ့ဝေဟင်မော်တော်ယာဉ် (UAV) panel ကို၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ CNC အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုအလွန် tool များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကို၎င်း,...
Palmrest Keyboard ကိုအထက် Casting OEM Semi Solid သေ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Semi-အစိုင်အခဲကီးဘုတ်, Palmrest Keyboard ကိုအထက်, မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း panel ကို Casting OEM Semi Solid သေ non-ferrous သတ္တုအလွိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ Sub-စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်,...
Mg အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ Casting OEM စိတ်ကြိုက် Semi-Solid သေ
OEM ထုံးစံလုပ် semisolid မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန် ချ. သေဆုံး, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Cast ယေဘုယျအားစသည်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများစက်မှုလုပ်ငန်း, စစ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်း, အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်ဆီသို့ပိုပြီးဘက်လိုက်နေသောထုတ်ကုန်အောင်,...
မဂ္ဂနီစီယမ်အသုံးအဆောင်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting OEM Semi-Solid သေ
OEM တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲသေမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းစျေးကွက်အတွက်အပေါ့ပါးဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့သတ္တုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အော်တိုမီတာသကဲ့သို့, အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းတိကျစွာအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သာအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အပိုပစ္စည်း, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း ချ....
Semi-အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဆေးထိုးသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်မှမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပူ ချ. semi-အစိုင်အခဲသေဆုံး, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားဆေးထိုးမှိုတန်ဆာအောက်, ထုတ်ကုန်ပိုကောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုတိကျသောဖြစ်ပါတယ်။...
OEM အမြင့် Precision Semi-Solid သေကာစ်အစိတ်အပိုင်းများ
Semi Solid သေကာစ်မှို
semi Solid သေကာစ် Mode ကို
semi Solid ကာစ် Method ကို